हाम्रो पहल : दिगो कृषि,पोषिलो आहार
आईतबार, कात्तिक १६, २०७७ ०४:०८:५४ युनिकोड
शुक्रबार, असोज ३०, २०७७ Dhading Sanchar
धादिङ,३० असोज ।
हाम्रो पहल : दिगो कृषि, पोषिलो आहार
कृषिकर्म, मूल धर्म, जीवन धान्ने यन्त्र,
यही यन्त्रले बाँचेका छौँ, यत्रतत्र सर्वत्र ।
असावधजनीले कृषि कर्म, पृथ्वीलाई क्षति,
दिगो कृषि अपनाउँ साथी, धर्तीको उन्नती ।।
कस्तो संयोग, आज मैले यो लेख सुरु गरिरहँदा एउटा सुखद समाचार पनि सम्झिरहेको छु । यसपालीको सन् २०२० को नोबेल शान्ति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य कार्यक्रमले पाएको छ ।
‘खाद्य आहार नै हरेक विषम् परिस्थिति विरुद्धको खोप हो ।’ भनेर एक पत्रकार सम्मेलनमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले भन्नुबाट नै हामीले खाद्य आहार, मानव जीवन, कृषि र पृथ्वीको महत्व बुझ्न सक्छौँ । आहार हाम्रो जीवनको मुल अंग हो । आहारलाई हाम्रो भान्सासम्म ल्याउन कृषि कर्म र यसमा संलग्न गतिविधिले ठुलो भूमिका खेलको हुन्छ ।
तर हाम्रो भान्सामा आउने सबै खाद्य सफा र सुरक्षित हुन्छ भन्ने होइन । कृषिमा बढी रसायनको प्रयोग, जमिनको क्षति र वातावरणीय प्रदुषणले गर्दा आहार असुरक्षित भएको हुन सक्छ । बढ्दो जनसंख्या र जलवायु परिवर्तनका प्रकोपको सटिक असरलाई मध्यनजर गर्दा पोषिलो आहार र स्वच्छ पृथ्वीका लागि दिगो कृषि मुल मन्त्र बनेर उभिन सक्छ ।
१६ अक्टोबर सन् २०२० मा संसारभर एकैसाथ ‘विश्व खाद्य दिवस’ मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा कृषि संस्थाको ७५ औँ वार्षिकोत्सव पनि परेको उक्त दिन ‘‘सबै जना मिलेर उब्जाउँ, पोषण बढाउँ, बाचौँ, हाम्रो पहल नै हाम्रो भविष्य हो,’’ अर्थात अंग्रेजीमा"Grow, naurish, sustain together, our actions are our future" भन्ने नारा सहित मनाइँदै छ ।
नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने ६५% भन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा वा कृषि कर्ममा लागेको देख्दा मलाई गर्व लाग्छ भने अर्काेतर्फ मलाई न्युनतम खाद्यकोलागि आयातमा निर्भर हुनुपरेको, बढ्दो रसायनको प्रयोगले जमिनको उर्वराशक्ति घटेको, किसानले आफ्नो उपजको सहि मूल्य नपाएको र कुपोषणले ग्रामीण भेगतिर ग्रसित भएका बालबालिका देख्दा रुन मन लाग्छ । कृषिलाई माया गर्ने एक यूवा भएका नाताले यस्ता कुराहरु देख्दा र सुन्दा मनमा साह्रै खल्लो लाग्छ ।
अहिलेको समयमा विज्ञानले ठुलो चमत्कार गरिसक्यो र पनि नेपालमा अझै कृषि क्षेत्रमा वैज्ञानिकिहरण हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले अब हामीले त्यस्तो कृषि तर्फ आफ्नो पाइला चाल्नुपर्छ, जसले धेरै उत्पादन देओस्, वातावरण कम क्षति गरोस् र कृषि र प्रकृति एक रथका दुइ सारथी हुन् भन्ने कुरा आत्मसाथ गर्दै भावी सन्ततीको लागि पनि आहारको स्रोत जोगिइरहोस् । यहि नै दिगो कृषिको मुल मन्त्र हो ।
दिगो कृषिले हाम्रो स्वास्थ्यमा मात्र नभइ वातावरण र पारिस्थितिक प्रणालीलाई पनि ठुलो मद्धत पु¥याउँछ । नेपालमा अहिलको कृषि कार्य गर्ने तरिका अस्थिर तथा अवैज्ञानिक छ । कुनैपनि उदाहरणले अहिलेको हाम्रो कृषि कार्यलाई दिगो भनेर पुष्टि गर्न सक्दैन । बिरुवामा लाग्ने किरा, रोग र त्यसका लागि आवश्यकता भन्दा बढी रसायन तथा विषादीको प्रयोग, एउटै जमिनमा सधैँभरी एकैनासका बाली लगाउनु, जमिनलाई बाँझो राख्नु, गाइवस्तुलाई सँधैभरी बाँधेर राख्नु, व्यवसायिक रुपमा पालिएका कुखुरा, माछाहरुलाई बढी भिटामिन दिनु जस्ता कुराहरुले मानव र पशुपंक्षीलाई तथा वातावरणमा ठुलो हानी निम्त्याउन सक्छ ।
अहिले रायायनिक मलको बढी प्रयोग र अन्य अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली पनि जलवायु परिवर्तनको एक प्रमुख कारण हुन् । यदि हामीले बेलैमा दिगो कृषिका लागि पहल सुरु ग¥यौँ भने त्यसले जलवायु परिवर्तनको नियन्त्रणमा ठुलो भूमिका खेल्नेछ । प्राङ्गारिक खेती तथा जैविक खेतीका कारण हाम्रो जीवन सहज बन्न सक्छ । यसरी हामीले स्वच्छ आहार पाउनुका साथै वातावरण र चक्रीय प्रणालीलाई जोगाइ राख्न सक्छौँ ।
अहिले सम्म हामीले उत्पादन तर्फका धेरै कुरा ग¥यौँ तर उत्पादनको कुरा उठान गर्दै गर्दा हामी उपभोक्ताको जिम्मेवारी के हो त भन्ने कुरा पनि आउँछ । हाम्रो प्रत्येक दिनको खानाको रोजाइले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । उपभोक्ताले दिगो आहारमा ध्यान दिन जरुरी छ । बजारमा पाइने प्रशोधन गरिएका तयारी खानाहरुको साटो आफ्नै घरमा उत्पादन भएको पोषिलो खानाको प्रयोग गरी उपभोक्ताले आफ्नो खानाको शैलीलाई स्वस्थ बनाउँदै लैजानुपर्छ जुन दिगो पनि होओस् । यसले दिगो कृषिमा प्रत्यक्ष रुपमा नै टेवा पु¥याइरहेको हुन्छ ।
विश्वमा हाल महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले पनि हाम्रो कृषि प्रणालीलाई चुनौति दिइरहेको छ । कोभिड–१९ को उपचारका लागि तत्काल कुनै खोप नबनिरहेको अवस्थामा हाम्र्रै खेतबारी र जंगलमा पाइने विभिन्न कृषि उपजहरुको दैनिक सेवनबाट कोरानाबाट बच्न सकिने विज्ञहरुले बताउनाले साँच्चै कृषिको महत्व झल्काएको छ । हाम्रो कृषिलाई दिगो बनाउँदै अगाडी बढ्नका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट आवश्यक पहल गर्न अत्यन्तै जरुरी छ ।
एक यूवाका रुपमा हामीले यस विषयमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सक्छौँ । यसका साथै हामीले हाम्रो परिवार, समाज र साथीहरुमाझ दिगो कृषि र पोषिलो आहार सम्बन्धी छलफल गरेर जनचेतना फैलाउन सकिन्छ । यसमा अझै कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजना र अन्य विभिन्न कृषि संग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुको मुख्य भूमिका हुन्छ ।
नेपालको दिगो विकासको लक्ष्यमा पनि कृषि विकासलाई मुख्य प्राथमितामा राखिएको छ ।
जसको उदाहरण स्वरुप लक्ष्य नं. २ मा राखिएको शुन्य भोकमरीलाई लिन सकिन्छ । जसमा भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्यसुरक्षा तथा उन्नत पोषण हासिल गर्ने र दिगो कृषिको प्रबद्र्धन गर्नेकुरा लाई जोड दिइएको छ । त्यसैगरी सबै प्रकारका कुपोषणको अन्त्य गर्ने र किशोरी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र अन्य व्यक्तिका पोषणसम्बन्धी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य दिगो विकासमा राखिएको छ।
त्यसैगरी विकासोन्मुख देशहरूमा कृषि उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि गर्न ग्रामीण पूर्वाधार, कृषि अनुसन्धान, प्रविधि विकास, वनस्पति तथा चौपायाको जिन बैंक स्थापनामा लगानी वृद्धि गर्ने, खाद्यमूल्यको चरम अस्थिरतालाई सीमित गर्नमा मद्दत पु¥याउन खाद्यवस्तु बजार र तत्सम्बन्धी कारोबारहरूको समुचित सञ्चालन हुने गरी उपायहरू अवलम्बन गर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । यसबाट हाम्रो देशमा दिगो विकासका लागि दिगो कृषिलाई जोड दिइएको प्रष्ट हुन्छ ।
अहिले दिगो कृषिका लागि विभिन्न पहलकदमीहरु भइरहेका छन्, विभिन्न अभियान तथा कार्यक्रमहरु भइरहेका छन । जसअन्तरगत ‘नविनतम् यूवा पहलहरु’ ‘सोचाइ–पोषणका लागि यूवा’, ‘शुन्य भोकमरीका लागि यूवा’ जस्ता अभियानहरु भइरहेका छन् । त्यसै गरी दिगो कृषिका लागि प्रेरणादायी चलचित्र ‘किस द ग्राउण्ड’ हेरेर पनि हामीले ज्ञान लिन सक्छौँ । हामीले विभिन्न माध्यमबाट ज्ञान लिँदै हामीले आ–आफ्नै स्थानबाट थोरै भएपनि पहल लियौँ भने अवश्य पनि दिगो कृषिको पाटोमा एउटा बलियो आधार तयार हुन सक्छ । हामी सबैले आजैदेखि आफ्नै परिवारबाट यस्ता कुराको थालनी गरिहाल्नु पर्छ ।
क्रान्तिका ठुला ठुला कुरा धेरै हुँदै गर्दा जुम्ला र हुम्लामा पोषण नपुगेर बालबालिकाहरुको मृत्यु भइरहेको समाचार सुन्नु परिरहेको दुखद अवस्था हाम्रा सामु छ । एउटा किसान आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर आफ्नो उत्पादनलाई सडकमा फाल्न, खाल्डो खनेर पुर्न मात्र होइन, आफै आत्महत्या गर्न समेत बाध्य भइरहनु परेको छ ।
तरकारी बारीमा दिनहुँ बिषादी छर्दा, त्यसको प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरु विभिन्न दीर्घरोगको शिकार हुनुपरिरहेको छ । आखिर यस्तो अवस्था कहिले सम्म त ? के हामी दिगो कृष् विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु अझै कार्यान्वयन नगर्ने ? मलाई लाग्छ, यस समस्याको समाधान दिगो विकासबाट नै सम्भव छ । त्यसैले आजै हामी आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर एक भइ जुटौँ र एउटा सानो भएपनि पहल गरौँ, ‘हाम्रो पहल : दिगो कृषि, पोषिलो आहार’ लाई सार्थक तुल्याऔँ ।
(यो लेख विश्व खाद्य दिवस २०२० को अवसर पारी कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङको आयोजनामा धादिङ जिल्लाभरका विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु बिच गराइएको निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको लेख हो । [लेखक संगम अधिकारी चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालय, बेनिघाट रोराङ–५, बिशालटार धादिङमा कक्षा १० मा अध्ययनरत रहेका छन् ।]